Iphalamende yeSouth Africa Inqolonga uMashabane Phezu Kodaba lukaGrace Mugabe
Idale lephalamende lakwele South Africa selibize umphathintambo obona ngobudlelwano balelolizwe lamanye amazwe, uNkosikazi Maite Nkoana Mashabane, ukuthi azechasise ukuthi kungani evikele uNkosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ayebhekane lakho phezu kwecala lokutshaya untombazana ayemthole elamadodana akhe, uGabriella Engels.
Isinqumo sokubiza uNkoana Mashabane lesi sithethwe ngamalunga ekomidi yedale ebona ngokudlelana lamanye amazwe ele Internatioanl Relations ngoLwesithathu.
Yena uMashabane utshele intathelizindaba ukuthi isinqumo sokuvikela uNkosikazi Mugabe phansi komthetho we-diplomatic immunity, kasithathanga kalula njalo lanamhla lokhu usazidla ingqondo ngaso.
Ngakolunye uhlangothi inhlanganiso emela uEngels, iAfriforum isihambe emthethwandaba ukuyaphikisa isinqumo sikaMashabane isithi waphambanisa njalo ithi uNkosikazi Mugabe kumele ajeziswe ngesenzo sakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe, uMnu Dinizulu Mbikokayise Macaphulana, utshele iStudio 7 ukuthi ukungenela kweAfriforum kololudaba kungaba kuyikho okwabangela ukuthi uNkoana Mashabane avikele uNkosikazi Mugabe.